प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको प्रश्न ,रोग र भोकले कसैलाई मर्न दिन्न भनेको होइन ? के मरेका मानिस नेपाली होईनन ? - Dainik Online Dainik Online
प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको प्रश्न ,रोग र भोकले कसैलाई मर्न दिन्न भनेको होइन ? के मरेका मानिस नेपाली होईनन ?
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मग्ने क्रममा छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओली प्रति कडा ब्यङ्य गरेका छन् । देउवाले नागरिकले दुक्ख पाउँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने प्रधानमन्त्रीले आत्मरति गर्न सुहाउँछ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
५ बर्सलाई निर्वाचित सरकारले तीन वर्षमै विश्वासको मत माग्ने स्थिति कसरी आयो ? यसमा उहाँकै दोष छ अरूलाई दोष लगाएर हुँदैन भन्दै देउवाले रोग र भोकले कसैलाई मर्न दिन्न भनेको होइन के मरेका मानिस नेपाली होईनन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने वर्तमान सरकारले विखण्डनको राजनीति सधैका लागि अन्त्य गरेको, देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा कुनै विवाद नरहेको, पृथकतावादी सोच राख्नेलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याएको, राजनीतिक इच्छा आकांक्षा पुरा गर्नका लागि हिंसालाई माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने सोच लिएकालाई पनि संवादको माध्यमबाट शान्तिपुर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याएको, दशकौ देखिको हिंसाको राजनीति अन्त्य गराउन पहल गरेको भन्दै आफुलाई विश्वासको मत दिनु नपर्नेुपर्ने कारण नै नरहेको तर्क गरेका छन् ।